Nandeha mantsy ny feo fa efa tamin’ny alarobia teo no nanatanterahan’ny sampan’ny zandary misahana ny heloka bevava ny famotorana ilay tovovavy sy ny rainy. Tsy mbola nisy anefa ny fampitam-baovao taorian’izay ka misy tamin’ireo mpanara-baovao no nihevitra fa efa nivalona sahady ity raharaha ity. Voatanan’ny tsiambaratelon’ny famotorana ireo mpitandro filaminana ary voazala fa mbola misy paik’ady amin’ny asa fitsikilovana sy ny angom-baovao ataony ka izay no tsy namoahany amin’ny ampahany ny vokatry ny fanadihadiana.
Araka ny fampitam-baovaon’ny mpitandro filaminana hatrany, tsy nilaza velively ilay tovovavy nandritra ny fanadihadiana azy fa nahita lohan’olona fa karandoha. Nanitsy io vaovao diso izay niely, vokatry ny fanadihadiana ireo mpitandro filaminana. Nanamafy hatrany ireto farany fa tsy marina ny feo mandeha fa efa nampidirina am-ponja vonjimaika ity tovovavy 21 taona, noho ny fanelezana tsaho izay nampisakoroka olona noho ny io karandoha lazainy fa hitany io, ny 9 aogositra teo raha sendra nikopaka ny lambam-baravarana.